Annaga nagu saabsan - Hebei Yiman Lanhua International Import & Export Co., Ltd.
Hebei Yiman Lanhua International Import & Export Co., Ltd. waa shirkad isku dhafan horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo soo dejinta iyo xuquuqda maamulka dhoofinta madax banaan, ku takhasusay daabacaadda dharka & rinjiyeynta warshadaha kiimikada la xiriira.
Laga soo bilaabo aasaaska ilaa hadda, shirkaddu waxay had iyo jeer u hoggaansantaa falsafada ganacsiga ee "bixinta macaamiisha loo baahan yahay alaabooyinka iyo adeegyada asaasiga ah, tayada badeecada oo ah aasaaska aasaasiga ah, u hoggaansanaanta mabda'a ganacsiga ee ku wajahan macaamiisha".
Wax badan ayaan qaban karnaa
Si loo sii horumariyo oo loogu adeego macaamiisha, waxaanu samaynay hal qaab oo la isku habeeyay ee silsilada sahayda alaabada dheehaynta : Xallinta badeecada ee ka-hortagga wax-soo-saarka, daabacaadda iyo dheehidda, ka-hortagga ka-hortagga daabacaadda dharka iyo dheeha.Si aad u wanagsan u wanaaji iswaafajinta alaabta kiimikaad ee kala duwan haddi ay dhacdo dhibaatadu ay fududahay in ay ku dhacdo habka midabaynta.
Shirkaddu waxay si adag u xakameysaa tayada badeecada iyo maareynta deegaanka, waxay ku gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ISO 9001.Ka sokow, Shirkaddu waa hormuudka ilaalinta deegaanka deegaanka, waxayna si isdaba joog ah u qabatay shahaadada ECO-PASSPORT, ZDHC Gateway, iyo shahaado GOTS.
Alaabadayada waxaa si fiican loogu iibiyaa suuqyada gudaha ee Shiinaha, sidoo kale waxaa lagu iibiyaa suuqyada caalamiga ah sida Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, Vietnam, Pakistan iwm oo ku yaal Aasiya, Turkiga, Spain ee Yurub, Guatemala ee Waqooyiga Ameerika.
Wakiilka Saabuunta Acrylic, Shaadhka Laastikada ah Khad Xariir Cad ah, Kaaliyeyaasha Kiimikada, Midabka Heerkulka Sare, Dhuxusha Kala firdhisan-La'aanta, Dheejinta Xakamaynta,